देश टुक्र्याउने कुरामा एमाले कसैसँग झुक्दैन– युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष, नेकपा(एमाले) Weekly Nepal
देश टुक्र्याउने कुरामा एमाले कसैसँग झुक्दैन– युवराज ज्ञवाली, उपाध्यक्ष, नेकपा(एमाले)
December 28th, 2016 | by Weekly Nepal
० मधेसी मोर्चाले उठाइरहेको संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा किन टेबल गर्न दिइरहनु भएको छैन ?
–पहिलो कुरा त संविधान संशोधन प्रस्ताव मुलुकको राष्ट्रिय हितविपरीत आएको छ । ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने कुरा पहाडबाट मधेसलाई अलग गर्ने गलत दृष्टिकोणका आधारमा गरिंदैछ । यसलाई आमजनताले मन पराइरहेका छैनन् । यो लाखौलाख जनताको भावना र आवश्यकताभन्दा विपरीत किसिमको छ । भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय पनि उत्तिकै बेठीक छन् । यही कारण हामीले सरकारले संसद्मा पेश गर्न लागेको संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेका हौं ।
० आफूलाई मन परेन भन्दैमा सार्वभौम संसद्लाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाएर महाभियोगलगायतका विषयमा छलफल हुन नदिनु प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यताविपरीत भएन र ?
–अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्ताव अत्यन्तै राष्ट्रघाती र औचित्यहीन छ । औचित्यहीन कुरालाई संसद्मा प्रवेश गराउनु प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा, अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुकमा ध्रवीकरणको खतरा पनि देखिन्छ । प्रदेश सीमांकनको विषयमा जनता नै विभाजित हुने, राजनीतिक दल नै विभाजित भएर मतदान गर्दा दीर्घकालसम्म विभाजित मानसिकता कायम राख्ने भएकाले सकेसम्म संशोधन प्रस्ताव नै फिर्ता होस् भनेर हामीले यसमा अलि बढी नै अडान राखेका हौं ।
० संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दा विभाजन आउँछ भन्नुभयो । तर, विभाजन त छलफल गर्न नदिएर पो बढ्ता भइरहेको देखिन्छ त ?
–सीमांकनको विषय खासगरी प्रदेश सभाले टुंग्याउने विषय हो । यो संविधानको धारा २७४ मा प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले नै सीमांकन टुंग्याउने गरी जसरी प्रस्ताव ल्याइएको छ, यो असंवैधानिक पनि छ भन्ने हामीलाई लाइरा’छ । अदालतमा यसबारे मुद्दा पनि चलिरहेको छ । एक त यो असंवैधानिक छ, अर्को कुरा जनता यसको विरोधमा छन् । यी तमाम कारण हामीले यसलाई छलफलमा आउन नदिएका हौं ।
० संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाई पुग्दैन, प्रस्ताव असफल हुन्छ भनेर तपाईंको पार्टी एमाले र अरु प्रतिपक्ष दलहरूले भनिरहेका छन् । बाह्र–सत्ताइस कुरा गर्नुभन्दा यसलाई छलफलमा प्रवेश गराएर असफल बनाए भैहाल्यो नि, संसद् किन अवरुद्ध पारेको ?
–हो, संसद्बाटै संविधान संशोधन प्रस्तावलाई फेल गराउन सकिने संख्या हामीसंग छ । तर, यहाँनिर सबै के कुरामा प्रष्ट हुन जरुरी छ भने संख्याको कारण हामी संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छैनौं, संशोधनको प्रस्ताव नै अनुचित भएकाले यसलाई वैधानिकता दिने कुरा गलत हुन्छ भनेर प्रवेश हुनबाट रोकेका हौं । अर्को कुरा, संविधानमा बाझिने गरी संशोधन प्रस्ताव आएकाले पनि यसले प्रवेश पाउन हुादैन भन्ने हाम्रो तर्क हो ।
० संशोधन प्रस्तावको कुन–कुन विषयमा एमालेको असहमति हो ?
–संविधान संशोधनको लागि भनेर चार प्रस्ताव ल्याइएको छ । अहिले सीमांकनको विषय बढी ‘हाइलाइट’ भइरहेका छन् तर, हाम्रो चारवटै विषयमा गम्भीर असहमति छ ।
० मधेसी जनताहरूको ठूलो समूहले संविधान अधुरो/अपूरो भयो भनेर आन्दोलन गरे, कैयन मारिए, घाइते भए । यति ठूलो असन्तुष्टिलाई अनुचित माग भनेर एमाले जस्तो जिम्मेवार दलले भन्न मिल्छ ? यो मधेसी जनतामाथिको अपमान भएन र ?
–यो संविधानको विपक्षमा १० प्रतिशत जनप्रतिनिधि मात्रै छन् । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले त संविधानमा सहमति दिएका छन् । पहिलो कुरा त यो संविधान मधेसीदेखि सबै आदिवासी जनजातिको हितमा छ । मधेसी जनताको हितविपरीत छ भन्ने कुरा विल्कुल निराधार हो । यो संविधानको विरोध त मधेसका केही राजनीतिक पार्टीले मात्रै गरेका हुन् । उनीहरूले विरोध गर्दैमा यो मधेसी जनताको विपक्षमा छ भन्न मिल्दैन । मधेसबाट निर्वाचित भएका तमाम राजनीतिक पार्टीका जनप्रतिनिधिले यो संविधान निर्माण गर्ने क्रममा भूमिका निर्वाह गरेका छन् । त्यसैले मधेसी जनताको ठूलो हिस्सा यो संविधानको पक्षमा छ । विपक्षमा त सीमित पार्टीमात्रै छन् ।
० अधिकांश मधेसी जनता संविधानकै पक्षमा छन् भन्नु भयो, तर यही संविधान जारी भएपछि मधेसमा त्यति ठूलो आन्दोलन भयो । उसो भए त्यसलाई कसरी लिने ?
–आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा आन्दोलन गर्नु जनताको अधिकारको कुरा हो । तर, मधेस आन्दोलनमा जति मान्छे आएका थिए, ती सबै मधेसी जनता थिए भन्ने कुरा सही होइन । मधेस आन्दोलनमा जनता नभएर केही निश्चित पार्टीका कार्यकर्ता आएका थिए । मधेसी जनताको अभिमत त निर्वाचनमा व्यक्त भएकै छ । हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ ।
० एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेले संविधान संशोधनका लागि भन्दै लगभग यस्तै खालको प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले यसैसंग जोडेर एमालेले आफैंले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गरेर सत्ताका लागि बार्गेनिङ गर्‍यो भनिदैछ । एमालेले सत्ताका लागि संविधान संशोधनको विषयमा बार्गेनिङ गरेको हो ?
–नेकपा एमालेको कुनै पनि डकुमेन्ट र लिखितमा मधेसमा अलग प्रवेश बनाउनु पर्छ भनेर उल्लेख छैन । व्यक्ति विशेषले कहाँ के कुरा गर्नु भयो, त्यसमा एमालेको सरोकार छैन । कसैले भनेको भए पनि त्यो त्रुटिपूर्ण कुरा हुन् ।
० एमाले कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्न नदिने, मधेसी दल संशोधन गरेरै छाड्ने । यी दुईको अडानले गणतन्त्र त थप पेचिलो मोडका पुगेको देखिादैछ । समस्या समाधानको एमाले रोडम्याप के हो त ?
–संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई स्थगित गरेर तीनवटा निर्वाचनमा जानु नै अहिलेको सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । तीनवटा निर्वाचनबाट आएको नयाँ जनतमतका आधारमा हामीले संविधान संशोधनको विषय टुंग्याउनु ठीक हुन्छ भन्ने एमाले रोडम्याप हो । त्यसैले संशोधनको कुरा गरेर अशान्ति र विभाजन गर्नुभन्दा पनि निर्वाचनबाट ताजा जनादेश लिएर सोही अनुरुप अघि बढ्ने बाटो समाउन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
० मधेसी मोर्चा संविधान संशोधन बिना निर्वाचनमा जाने कल्पनै गर्न सकिंदैन भनिरहेको छ । मधेसी दल बिनाको निर्वाचन सम्भव छ त ?
–हो, हाम्रो कुरा लागू नभएसम्म निर्वाचनमा जाँदैनौ भनेर मधेसी दलहरूले भनिरहेका छन् । तर, मधेसी दलका नेताले यस्तो भनिरहेका भएपनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर योजना बनाउँदा बारम्बार निर्वाचनमा गएका मधेसी दलका नेताले निर्वाचन नै बहिस्कार गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा सरकारले नै निर्वाचनको मिति घोषणा नगरिरहेका बेला निर्वाचनमा जान्छौं भनेर पनि त भएन नि । त्यसैले सरकारले पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा निर्वाचनमा जान दवाव सिर्जना गर्नुपर्छ । यदि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर सरकार अघि बढ्दा पनि बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्नु हुन्छ भने यो जनताको भावनाविपरीत अघि बढेको ठहर्नेछ ।
० एमाले दोस्रो ठूलो दल । उसले अलि जिम्मेवार भएर यो विषयलाई टुंग्याए के हुन्छ ?
–हो, एमाले देशकै प्रमुख जिम्मेवार पार्टी हो, उसले गैरजिम्मेवार हुनै मिल्दैन । त्यसैले हामी जिम्मेवार भएरै अघि बढिरहेका छौं । तर जब राष्ट्रियतामाथि नै खतरा हुन्छ, मुलुकलाई नै बर्वाद पार्ने किसिमले कुराहरू आउँछन् भने त्यस्तो कुरामा जिम्मेवारीका नाममा झुक्ने कुरा हुँदैन । देश टुक्र्याउने, विगार्ने कुरामा एमाले कसंैसंग झुक्ने छैन/झुक्नु हुँदैन । हामीले जिम्मेवार भएरै यो विधेयक स्थगित गरेर अब निर्वाचनसम्बन्धी काममा लागौं भनेका हौं ।
० तपाईंहरू नै संसद् अवरुद्ध गरिरहनु भएको छ । अब यस्तो बेला निर्वाचन सम्बन्धी कानून कसरी बन्न सक्छ ? यो त हलो अड्काएर गोरु चुटे जस्तो भएन र ?
–सत्तापक्षले यसलाई फिर्ता या स्थगित गरेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीले सरकारले अनावश्यक संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकाले अवरोध गरेका न हौं ।
० एमालेको अबको बाटो के हो त ?
–सम्पूर्ण रुपमा संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु नै एमालेको अबको बाटो हो । सरकारले पनि निर्वाचन घोषणा गरेर देशलाई अघि बढाउनु पर्छ ।
० तपाईहरूको माग अनुसार, सरकार अघि बढेन भने एमालेले के गर्छ ?
–हामी लगातार गलत कुराको विरोध गरिरहनेछौं । सरकार चुनाव छाडेर संशोधनतिर लाग्यो भने यसको परिणाम राम्रो आउँदैन । शान्तिपूर्ण ढंगले आन्दोलन गरेर पनि हामी सरकारलाई दबाब दिइरहनेछौं ।
० एमालेलाई संघीयता, समावेशीजस्ता नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएका प्रगतिशील व्यवस्था नै मन परेको छैन र ऊ बखेडा झिकिरहेको छ भन्ने आरोप पनि लागिरहेको छ । वास्तवमा एमालेलाई यी कुरा स्वीकार्न गाह्रो भएको हो ?
–एमालेले हचुवाको भरमा संघीयता, समानुपातिक, समावेशितामा जाने निर्णय गरेको होइन । एमालेले लामो छलफल र विचार विमर्शपछि देशलाई संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । यसबारे हामीले पार्टीका विभिन्न बैठकबाट संस्थागत रुपले नै निर्णय नै गरेका छौं । संविधान निर्माण गर्न हामीले सबैभन्दा अग्रगामी र मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका छौं । नेपालको संविधानमा नै मुलुकलाई सात प्रदेशमा विभाजित गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । आफैं संविधान बनाउन भूमिका खेलेको र संविधान अनुसार चल्ने पार्टी भएकाले हामी यतिबेला संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विरोधमा जानै सक्दैनौं । एमाले संघीयताको खिलापमा गयो भन्ने कुरा सम्पूर्ण रुपमा निराधार हो ।
० भन्न त भन्नु हुन्छ नि । तर, तपाईंकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संघीयतालाई ‘विष’को संज्ञा दिइसक्नु भएको छ । उहाँहरूको अभिव्यक्तिलाई आम सर्वसाधारणले कसरी बुझ्ने ?
–व्यक्ति विशेषका आ–आफ्ना खालका विचार/मान्यता हुन सक्छन् । तर, नेकपा एमालेको संस्थागत अडान संघीयता, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको पक्षमा नै रहन्छ । जहाँसम्म संघीयताको कुरा छ यो चाहिं नेपाली विशेषताको हुन्छ, भारत, अमेरिकाको संघीयताभन्दा पृथक किसिमको हुन्छ । विरोधीहरूले आलोचना गर्नु, विरोध गर्नु एउटा कुरा हो तर, संस्थागत रुपमा निर्णय गरेर संघीयतामा एमाले गइसकेकाले यसबाट एमाले फर्कन्छ भन्ने कुरा सही होइन ।
० तपाईंको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मले खुलेर भनेको कुरालाइ यति हल्का रुपमा लिन मिल्छ ?
–संघीयताबारे हाम्रा कुनै पनि नेताको आफ्नो व्यक्तिगत विचार हुनसक्छ । तर नेकपा एमाले संघीयताबाट पछाडि फर्किदैन । यसमा सबैजना निर्धक्क भए हुन्छ ।
० पार्टी नीति र संविधानविपरीत अध्यक्ष र उपाध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति बोल्न मिल्छ ? पार्टीनीति र संविधान विपरीत बोल्ने नेतालाई अब के गर्नुहुन्छ ?
–संघीयता संविधानमै व्यवस्था भइसकेकाले यसको विपक्षमा बोल्नु भनेको संविधानको विपक्षमा बोल्नु हो । त्यसैले यतिबेला संघीयताको विपक्षमा बोल्नुभन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ । अरु कुरामा लाग्नु हुँदैन ।
० अध्यक्ष र उपाध्यक्षले संविधानविपरीत किन बोल्नु भएको होला, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हुन सक्छ । म यसबारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्नँ ।
० सरकारको काम कारबाहीलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
–वर्तमान सरकारको समग्र काम कारबाही ठीक ढंगले अघि बढेको छैन । मुख्य काम निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नु भएपनि उसले गर्न सकेको छैन । सरकारले राजनीतिलई ठीक दिशामा अघि बढाउन भूमिका खेल्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यो काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । सरकारकै कारण संविधान नै असफल हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । समग्रमा यो सरकार मूल काममा असफल भएको छ ।
० उसो भए असफल सरकारलाई निरन्तरता दिने कि विकल्प खोज्ने त ?
–हामी अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्न चाहँदैनौं । हाम्रो ध्यान सरकार परिवर्तन गर्नेमा भन्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा छ ।
एमालेकै कारण देश मुठ्भेड्मा जान थालयो र देशको अस्तित्वनै खतरामा पर्ने अवस्थामा पुग्ने वस्था आयो भने पनि बहुमत पनि अल्पमत समक्ष्य झुक्नु पर्ने एमालेको ठम्याइ हो ? नत्र समस्या समाधानको उपाय न देख्नेको राष्ट्रियता अन्धो राष्ट्रभक्ती बाहेक केही हुने छैन । यो जनताले बुझेका छन एमालेको यही रवैयाले भोट् ब्यन्क बड्ने होइन आश्चर्य लाग्दो गरी खस्कने निस्चित छ .